IOS 10 ma isticmaashaa batteri fara badan? Ku hagaaji talooyinkan | Wararka IPhone
IOS 10 ma isticmaashaa batteri fara badan? Ku hagaaji talooyinkan
IOS 10 way timid, dhib la'aan la'aan. Aniga, sida kuwa kale oo badan, waxaan arkaa baytariga aaladaha sida iPhone 6s duulaya. Si kastaba ha noqotee, wax waliba waxay leeyihiin xal nololeed (marka laga reebo geerida), sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan kaa caawinno talooyinkan si aad u hagaajiso waxqabadka batteriga ee iOS 10. Xaqiiqdu waxay tahay in qaabkan cusub ee nidaamka hawlgalka Apple uu ku raran yahay warar, Si kastaba ha noqotee, kuwan astaamaha cusub badanaa waxay ubaahanyihiin ilaha tamarta waxyaalahan oo dhami waxay baabi'inayaan baytariga aaladda. Aynu wajahno, sifooyinkaas badankood oo aanan xitaa ogeyn inay jireen. Marka, ha moogaanin talooyinkeena ku saabsan hagaajinta waxqabadka batteriga ee iOS 10. Tilmaamaha ugu horreeya ee dhammaantood waa calibrate batteriga iPhone laakiin sidoo kale, raac tabahaan si aad u sii wanaajiso waxqabadkeeda xitaa inbadan.
1 Ka fikir waxa aad isticmaaleyso ama aadan isticmaalin, oo barkinta ka jooji
2 Cusbooneysiinta aasaasiga ah, daadinta batteriga
3 Goobta, batari kale oo daadanaya
4 Hababka aan caadiga ahayn
Ka fikir waxa aad isticmaaleyso ama aadan isticmaalin, oo barkinta ka jooji
IOS 10 waxay keeneysaa shaqooyin badan oo cusub, iswaafajin otomaatig ah oo lala socdo macOS Sierra desktop, hagaajinta tooska, khariidadaha, laakiin ... dhammaantood miyaad isticmaashaa? Waan ka shakisanahay, taasi waa sababta waxaa ugu wanaagsan in sifiican loo fiiriyo astaamaha iyo dejimaha cusub ee iOS 10 si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka guud ahaan, Shakhsiyan waxaan ku sameeyaa mid kasta oo ka mid ah noocyada cusub ee macruufka, waxay kaa caawineysaa inaad hagaajiso waxqabadka batteriga wax badan, tusaale ahaan, Spotlight ayaa si buuxda isugu dhafan, laakiin marwalba uma baahnid inaad ka warqabto mid kasta oo ka mid ah codsiyada.
Intaas waxaa sii dheer, xarunta ogeysiinta waxaan ka heli doonnaa wijetro aynaan badiyaa u isticmaalin Suuqa Suuqa ama xitaa Jawiga sida ay adeegsadayaashu u sheegaan, waa waqti fiican in sidoo kale laga takhaluso. Waa muhiim in aan go'aamino noocyada cusub ee macruufka iOS ah ee aan xiiseyneyno iyo kuwa aan ahayn.Markaad wada shidato kama caawineyso waxqabadka gebi ahaanba, gaar ahaan aaladaha da'da ku filan. Sababtaas awgeed, waxaan si adag kugula talinayaa inaad ka fikirto shaqooyinka run ahaantii muhiim ah iyo kuwa la buuxinayo, isticmaale kasta wuxuu leeyahay dookhiisa.
Cusbooneysiinta aasaasiga ah, daadinta batteriga
Waxaa jira codsiyo macno ahaan u daadinaya batteriga iPhone 6 iyo moodooyinka kale inta ay ka shaqeeyaan asalka, waxaan ka hadleynaa WhatsApp, Facebook iyo xitaa Instagram, barnaamijyadan ku saabsan aaladaha leh in ka badan 1GB RAM (iPhone 6s iyo wixii ka dambeeya) waxay u muuqdaan inay fur fur, tusaale kale waa Pokémon Go, oo consume xogta iyo batteriga ee asalka ah, si kastaba ha noqotee wax yar ama faa'iido la'aan ayaa leh maadaama aannaan ugaarsan karin haddii aan isticmaaleyno codsi kale. Qeybaha> Qeybta Guud waxaan kaheleynaa Cusboonaysiinta Taariikhda.
Haddii aan galno waxaan arki doonaa liiska codsiyada iyo furayaasha dhaqaajiya, waa wakhti fiican oo xul ahCodsiyada sida WhatsApp, runtu waxay tahay in la qadariyo, si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa wax walba si looga saaro barnaamijyada qaar oo aanan si joogto ah u isticmaalin.
Goobta, batari kale oo daadanaya
Waxaa jira hawlo sida «iAds goobta»Ama«goobaha soo noqnoqda»Inaan loo isticmaali doonin wax aan ka aheyn qashin-qubka, waa wakhti fiican oo la aado Dejinta> Asturnaanta, qayb ka mid ah qaabeynta iPhone-ka oo aan inta badan ka tagno. Aniga shaqsi ahaan marwalba waxaan tagaa "Nidaamka Adeegyada" oo waxaan u joojiyaa sida xiisaha leh. Si kastaba ha noqotee, liiska codsiyada waxaa muhiim ah in aan lagu qaabeynin «Siempre«, Maadaama arjiga uu ku shaqeyn doono asalka oo uu isticmaali doono GPS 24 saacadood maalintii.
GPS si xad dhaaf ah uma cuno, laakiin marka codsiyada sida TripAdvisor ay si xun u isticmaalaan, natiijadu waa masiibo, xusuusnow in haddii ay na soo hesho ay ku shaqeyneyso asalka, batteriga macsalaameeya.
Haddii aad fulisay dhammaan khiyaamooyinkaas oo waliba sidaas oo ay tahay haddana isticmaalka weli aad ayuu u liitaa, malaha cilladdu waxay ku jirtaa nidaamka qalliinka oo waa waqtigii dib-u-eegis lagu siin lahaa. Gaar ahaan haddii aad cusbooneysiisay iOS 10 oo ka socota iOS 9 oo aadan dib u soo celin qalabka, qaladaadkan ayaa soo bixi kara. Qiyaasta ugu horeysa ee aasaasiga ah waxay noqon doontaa in la sameeyo «Dib u celi»Aaladda, tan waxaan u riixi doonnaa Guri + Awood ilaa 10 ilbidhiqsi. Waxaan sugi doonaa inta qalabku shaqeynayo oo aan adeegsan doono maalin, si aan u eegno in batteriga uusan horumarin.
Haddii wax waliba sideedii ahaadaan waxaan tixgelinaynaa laba ikhtiyaar, soo celinta qalabka ama ka faa'iideyso inaad ku noqoto macruufka 9.3.5 hadda oo Apple wali ay saxiixeyso noocaas nidaamka qalliinka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » IOS 10 ma isticmaashaa batteri fara badan? Ku hagaaji talooyinkan
Ka faallo in iphone 6s, iyo rakibid nadiif ah, runta ayaa ah in batteriga uu sii socdo si la mid ah sida ios9. Sidoo kale waxaad dhahdaa hagaajinta halkan lagu xusay, marwalba waan fuliyay, laakiin way fiicantahay in laga faalloodo haddii ay dhacdo in qof tixgalin siin waayo. Inta soo hartay, waxay ila tahay horumar aad muhiim u ah cusbooneysiintan oo ah, dhadhankeyga, inay OS aad uga dhigeyso mid casri ah oo saaxiibtinimo leh.
Waad salaaman tahay, ka faallood in iPhone 7 'Reset' lagu sameeyo "Volume Hoose" + Awood
Waxaan shiday taleefankayga iPhone 7 maalintii ugu horeysay 15h ilaa hadana waa shidan tahay 17% waxay la timid lacag 87% ah xilligan layaabka
Sida loo yareeyo cabirka ogeysiisyada shaashadda ugu weyn ee Banners, waa wax weyn oo laga xumaado
Ka dib markaan ka tago dheriga 800 ee yuro ee ugu sarreeya, waa inaan qaataa fiilo dheeri ah.
Ku jawaab pescaerojose
Apple waxay ka fiirsanaysaa inay ka furto dukaan tafaariiqda Koonfurta Kuuriya
NBA 2K17 hadda waxaa laga heli karaa App Store